अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन - खेलकुद - साप्ताहिक
थाइल्यान्डमा सम्पन्न एसीसी वुमेन्स क्रिकेटमा नेपालको प्रदर्शन यति खराब हुनेछ भनेर सम्भवत: कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । कल्पना गरियोस पनि कसरी ? नेपाली टिम प्रतियोगिता खेल्न थाइल्यान्ड जानुअघि प्रशिक्षक राजु बस्न्यातले ठूलो सपना बुनेका थिए, कम्तीमा टेस्ट खेल्ने कुनै एक टिमलाई हराउने । उनलाई पूरा विश्वास थियो, नेपाली टिमले कुनै न कुनै खेलमा राम्रो गर्नेछ ।
उनलाई लागेको थियो, श्रीलंका र बंगलादेशका महिला टिम केही कमजोर हुन सक्छन् अथवा नेपालले थाइल्यान्डलाई नै हराउन सक्छ ? तर जति बेला नेपाली टिम प्रतियोगिता खेलेर काठमाडौं फर्कियो, सबैको एउटै प्रतिक्रिया रह्यो, यति खराब प्रदर्शन त नेपाली खेलकुद इतिहासमै विरलै हुन्छ । यो प्रदर्शन वास्तवमै कति खराब रह्यो भने पछि यस्तै नमज्जाको प्रदर्शनसम्बन्धी उदाहरण दिनुपर्दा, अब यही एसीसी विमेन्स क्रिकेटको प्रसङ्ग उठ्नेछ । नेपालका लागि यो प्रतियोगिता सधैंका लागि बिर्सनलायक थियो ।
प्रतियोगितामा नेपालले कुल पाँच खेल खेल्यो । त्यसमा नेपालको ब्याटिङ निकै फितलो देखियो । पाकिस्तानविरुद्ध ४७, श्रीलंकाविरुद्ध २३, बंगलादेशविरुद्ध ४१, थाइल्यान्डविरुद्ध ६२ तथा भारतविरुद्ध २१ । सबैभन्दा पहिले श्रीलंकाविरुद्ध २३ रनमा अलआउट भएपछि नेपाली महिला टिमले ट्वान्टी– २० क्रिकेटमा बनाएको सबैभन्दा कम स्कोरको खराव कीर्तिमान तयार भयो । यो कीर्तिमान फेरि यही प्रतियोगिताका क्रममा भंग भयो, भारतविरुद्धको अन्तिम खेलमा ।
नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीले थाइल्यान्डविरुद्ध मात्र ५० रनको सीमा काट्न सफलता प्राप्त गरे । स्पष्ट छ, नेपालको ब्याटिङ पूर्णत: असफल भयो । प्रशिक्षक बस्न्यात स्वंयले पछि माने, नेपालको कमजोर ब्याटिङले गर्दा नै यति कमजोर प्रदर्शन भएको हो । नेपालले थाइल्यान्डमा १५ जना खेलाडी लगेको थियो र संयोगले ती सबै खेलाडीले प्रतियोगितामा खेल्ने अवसर पाए, तर कसैको व्यक्तिगत प्रदर्शन राम्रो भन्न सकिने स्थिति रहेन ।
प्रतियोगितामा नेपालले कुनै छक्का पनि प्रहार गर्न सकेन । आधुनिक ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा छक्का–चौका मै खेलको आकर्षण हुन्छ । नेपाल यसमा पनि नराम्रोसँग चुक्यो । सबै खेलाडीमध्ये तीन जनाले मात्र प्रतियोगितामा दोहोरो अंकको रन बटुल्न सके । नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक ४३ रन बनाइन् । नेपालले १० चौका प्रहार गरेकोमा त्यसमध्ये तीन ज्योति र अरू तीन सीता रानाको नाममा रह्यो ।
नेपाली टिमको पूरा कथा सुन्ने हो भने सम्भवत: यस किसिमको प्रदर्शन अपेक्षित पनि थियो । नेपाल हङकङमा यसअघि सम्पन्न आईसीसी वुमेन्स वल्र्डकप क्वालिफायर एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेर अहिलेको एसियाकपका लागि छनोट भएको हो । नेपालले उक्त प्रतियोगितालगत्तै समयमै तयारी सुरु गरेन् । बरु यसबीच नेपाली टिमका प्रशिक्षक बस्न्यात माथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लाग्यो, आफ्नै केही खेलाडीबाट । पछि अरू खेलाडीले त्यसको खण्डन गरे ।
प्रशिक्षक बस्न्यातमाथि लागेको उक्त आरोप पुष्टि गर्ने आधार पनि थिएन, तर त्यसले टिमको वातावरण धमिल्याउने काम गरिसकेको थियो । फेरि नेपाली महिला टिमलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएकाहरूको भनाइ सुन्ने हो भने त्यो अझ निराशाजक छ । टिममा अहिले फुट र गुटबन्दीको स्थिति छ । खास–खास खेलाडीबीच बोलचाल छैन र खेलकै क्रममा खेलाडी–खेलाडीबीच झगडा परेका घटना प्रसस्तै छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा टिममा अनुशासनको पूर्ण अभाव छ ।
रियोमा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन